Max Energy | Health
Max Energy Family donation to AYA Center (October 2020)
ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းက အဓိက ပံ့ပိုးကူညီ ဦးဆောင်မှုဖြင့် COVID -19 လူနာများကို လက်ခံကုသပေးလျက်ရှိနေသည့် ဧရာဝတီ စင်တာအတွက် Max Energy နှင့် Thilawa Terminal မှ ဝန်ထမ်းများစုပေါင်းအလှူအဖြစ် ငွေကျပ် ( ၆၁၆၀၀၀၀ ) ကို စေတနာ ထက်သန်စွာဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။
Max Energy Fuel contribution for Ambulance (September & October 2020)
Support Front Line Fighter (April 2020)
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ လူနာတင်ယာဉ်များနှင့် အခြားကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူများ၊ Taxi များအတွက် Max Energy မှထပ်မံ၍ စျေးနှုန်းလျှော့ချကာ အထူးစျေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ကုသရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၊ လူနာတင်ယာဉ်များနှင့် အခြား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူများသာမက အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသော Taxi အငှားယာဉ်များကို ဧပြီလ (၂၀)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဧပြီလကုန် (၃၀)ရက်နေ့အထိ Octane 92 RON အား (၂၅၀) ကျပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Octane 95 RON အား (၃၀၀) ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ Diesel အား (၃၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ အထူးစျေးနှုန်းဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ Max Energy စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်များတွင် ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အထူးစျေးနှုန်းအား Taxi အငှားယာဉ်များသည် (၁၅) လီတာနှုန်းဖြင့် နေ့စဉ် ရယူနိုင်ပါသည်။
Max Energy မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် လာရောက်အားပေးသော မိတ်ဆွေများအတွက် COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားရောဂါအား တတ်အားသရွေ့ကာကွယ်နိုင်ရန် မက်စ်အင်နာဂျီ စက်သုံးဆီဆိုင်များတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
Fire Safety Training (March 2020)
Trash Cleaning at Yankin Children Hospital (Jan 2020)
ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးပတ်ဝန်းကျင် အမှိုက်ကင်းစင်စေရေးအတွက် အပတ်စဉ် သန့်ရှင်း‌‌ရေးဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိရာတွက် Max Energy Co., Ltd မှဝန်ထမ်းများသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်စုပေါင်း ပါဝင်လုပ်အားပေးခဲ့ကြပါသည်။
(၆) ကြိမ်မြောက် နှစ်ဦးအကြို သွေးလှူခြင်း (Dec 2019)
သွေးသည် လူတို့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွက် လွန်စွာအရေးကြီးသလို ၊ မိမိသွေးကို တစ်ပါးသူအပေါ်လှူဒါန်းရခြင်းသည်လဲ လွန်စွာမွန်မြတ်လှသော အလှူဒါနဖြစ်ပါသည်။(၃၀.၁၂.၂၀၁၉) ရက်တွင် Max Energy စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ရုံးချုပ်မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆီသိုလှောင်စခန်းမှ ဝန်ထမ်းများစုပေါင်း၍ သွေးလိုအပ်လျက်ရှိသောသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ သွေးလှူဘဏ် အသီးသီးတွင် (၆) ကြိမ်မြောက်အဖြစ် နှစ်သစ်ကူးအကြိုသွေးလှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
သွေးလှူဒါန်းခဲ့ကြသော ဝန်ထမ်းများအားလုံးအတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
Trash Cleaning at Yankin Children Hospital (October 2019)
ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးပတ်ဝန်းကျင် အမှိုက်ကင်းစင်စေရေးအတွက် အပတ်စဉ် သန့်ရှင်း‌‌ရေးဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိရာတွက် Max Energy Co., Ltd မှဝန်ထမ်းများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်စုပေါင်း ပါဝင်လုပ်အားပေးခဲ့ကြပါသည်
MAX ENERGY is excited to announceasafety milestone! (Dec 2018)
December 5th, 2018 marked one year (365 LTI free days) as we have worked withoutalost time injury since our last recordable incident.
Our ultimate goal is that every single employee goes home safe at the end of the day to their family and friends. This achievement would not have been accomplished had we not had total commitment from everyone.
“ Congratulations to every MAX ENERGY employee who recognizes the importance of safe work and contributes to make it happen ”
Blood Donation for 25th Anniversary of Max Myanmar Group (December 28, 2018)
Trash Cleaning at Yankin Children Hospital (November 2018)
ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးပတ်ဝန်းကျင် အမှိုက်ကင်းစင်စေရေးအတွက် အပတ်စဉ် သန့်ရှင်း‌‌ရေးဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိရာတွက် Max Energy Co., Ltd မှဝန်ထမ်းများသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်စုပေါင်း ပါဝင်လုပ်အားပေးခဲ့ကြပါသည်
Blood Donation (May 2018)
Max Energy စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ရုံးချုပ်မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆီသိုလှောင်စခန်းမှ ဝန်ထမ်းများစုပေါင်း၍ သွေးလိုအပ်လျက်ရှိသောသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ သွေးလှူဘဏ် အသီးသီးတွင်သွေးလှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
Fire Safety Training (July 2018)
Blood Donation (Dec 2017)
Max Energy's blood donation (June 2016)
Max Energy, along with Cars DB, O Way and SP Bakery, participated in 2016 World Blood Donor Day held in National Blood Bank on 14th of June 2016. It is estimated that around 200 people donated on that day including Max Energy employees.
Max Energy Monthly Donations (April 2016)
Max Energy employee’s monthly donation for needy people for April 2016 is to Ar Yu Par La Medicine Donation Group in Nga Thine Chaung, by Max Energy Filling Station (Nga Thine Chaung), lead by Supervisor Thet Lwin Oo and to Thit Pakan Pin Orphanage by Max Energy Filling Station (Baw Ga Thiri) lead by Senior Manager U Khin Maung Kyi. Each places were donated with 1 million Kyats.
Max Energy Monthly Donation (Oct 2015)
Max Energy has been donating to needy people and monastries onamonthly basis with the fraction of the employee’s salary and for the second time in October 2015, Max Energy Assistant General Manager U Myo Win Tun, Max Energy (Hmawbi) Filling Station manager U Nay Lin and it’s employee went and donatedamillion kyats for the renovation of the library in Ministery of Information, Hmawbi Township, on behalf of Max Energy Co., Ltd.
Max Energy Monthly Donation (December 2014)
Max Energy has been donating to needy people and monastries onamonthly basis with the fraction of the employee’s salary and for December 2014, Asst. General Manager Daw Win Win Yu, Asst. HR Manager Daw Hsu Lai Yee, Max Energy (Lay Dauk Kan) filling station’s manager U Khine Min and it’s employees went and donatedamillion kyats to Ywar Thar Gyee asylum on behalf of Max Energy Co., Ltd.
Max Energy Monthly Donation (October 2014)
Max Energy has been donating to needy people and monastries onamonthly basis with the fraction of the employee’s salary and for October 2014, Max Energy Head office’s Asst. Genereal Manager U Myo Win Tun, Max Energy (Dagon-Ayer) filling station’s manager U Zaw Naing and it’s employees went and donatedamillion kyats to Hlaing Thar Yar Worker’s Hospital on behalf of Max Energy Co., Ltd.
Max Energy Monthly Donation (September 2014)
Max Energy has been donating to needy people and monastries onamonthly basis with the fraction of the employee’s salary and for September 2014, Max Energy (Bahan) filling station’s manager U Thein Than Myint and it’s employees went and donatedamillion kyats to Yankin Children’s Hospital on behalf of Max Energy Co., Ltd.